French manhamba kubva 1 kusvika 1000 - UniProyecta
Patakatanga dzidza mutauro mutsva, sezvo chingave mutauro wechiFrench kana Chirungu, chimwe chezvinhu zvekutanga kujekesa zviri nhamba. Naizvozvo, nhasi tichaona kuti akanyorwa sei, madanirwo awo uye mamwe maekisesaizi kuti iwe ugone kudzidzira. Uye zvakare, takagadzirira a rwiyo runonakidza umo munhu wechiFrench anoimba manhamba kubva pa1 kusvika ku20. Wagadzirira here? Iva nekofi yakanaka uye… ngatitangei!
1 Maitiro ekunyora manhamba muFrench
2 Kududzwa kwenhamba muFrench
Maitiro ekunyora manhamba muFrench
Muchikamu chekutanga ichi tinemazita emamwe matafura anobatsira mauri kuona nhamba pachayo kuruboshwe, kuti yakanyorwa sei muchiFrench mukamuri yepakati uye, pakupedzisira, kuti yakanyorwa sei muchiSpanish mukoramu yekupedzisira.
3 trois kolme
4 quatre vana
6 six vatanhatu
7 sept vanomwe
8 huit hupfumi
9 neuf mapfumbamwe
10 dix gumi
11 onze kamwe
13 treize gumi netatu
14 quatorze gumi neina
15 quinze gumi neshanu
16 seize gumi nenhanhatu
17 dix-sept gumi nenomwe
18 dix-huit gumi nesere
19 dix-neuf gumi nepfumbamwe
20 vingt makumi maviri
Sekuona kwedu, manhamba makumi maviri ekutanga akafanana neSpanish. Chinhu chikuru chekurangarira kubva muchikamu ichi ndechekuti kusvika pagumi nematanhatu, kuenzana kunochengetedzwa. Gare gare, zviri nyore, nekuti 17, 18 uye 19 zvinoumbwa nekujoinha iyo gumi (Dix) uye nhamba inoenderana. Nenzira iyi, zvichiteerana: dix-sept, dix-huit uye dix-neuf.
3 vatatu kolme
6 nhanhatu vatanhatu
7 nomwe vanomwe
8 sere hupfumi
9 itsva mapfumbamwe
12 gumi nembiri doce
16 kubata gumi nenhanhatu
17 -dhi-sept gumi nenomwe
18 gumi nesere gumi nesere
19 gumi nepfumbamwe gumi nepfumbamwe
20 makumi maviri makumi maviri
21 vingt et a makumi maviri
22 vingt-deux makumi maviri nemaviri
23 vingt-trois makumi maviri nematatu
24 vingt-quatre makumi maviri nemana
26 vingt-vatanhatu makumi maviri nenhanhatu
27 vingt-sept makumi maviri ne nomwe
28 vingt-huit makumi maviri nesere
29 vingt-neuf makumi maviri anepfumbamwe
31 trente et un Makumi matatu nerimwe
32 unoita makumi matatu nembiri
33 makumi matatu nenhatu Makumi matatu nematatu
37 Makumi matatu-Sept makumi matatu nemanomwe
38 zviite makumi matatu nesere
39 trente neuf makumi matatu nemapfumbamwe
40 kubvisa makumi mana
41 kuzvidzivirira uye un Makumi mana nerimwe
42 quarante-deux makumi mana nembiri
43 kuvhiya-trois makumi mana nematatu
44 quarante-quatre Makumi mana nemana
45 kuzviparadzanisa-cinq makumi mana neshanu
46 kubvisa hutanhatu Makumi mana nenhanhatu
47 kuzviparadzanisa makumi mana nemanomwe
48 kubvisa-huit makumi mana nesere
49 kuzviparadzanisa-neuf makumi mana nemapfumbamwe
51 makumi mashanu uye un Makumi mashanu nerimwe
52 yezhizade makumi mashanu nembiri
53 richave Makumi mashanu nematatu
54 richave Makumi mashanu nemana
55 iclipati-cinq makumi mashanu neshanu
57 richave makumi mashanu nenomwe
58 richave makumi mashanu nesere
59 yezhinyra makumi mashanu nemapfumbamwe
60 zvakanyanyisa makumi matanhatu
61 soixante et a makumi matanhatu nerimwe
62 soixante-deux Makumi matanhatu nemaviri
63 soixante-trois Makumi matanhatu nenhatu
64 soixante-quatre makumi matanhatu nemana
65 soixante-cinq Makumi matanhatu neshanu
66 soixante-nhanhatu Makumi matanhatu nematanhatu
67 soixante-sept makumi matanhatu nenomwe
68 soixante-huit Makumi matanhatu nemasere
69 soixante-neuf makumi matanhatu nemapfumbamwe
70 soixante-dix makumi manomwe
71 soixante et oze makumi manomwe nerimwe
72 soixante-douze Makumi manomwe nemaviri
73 soixante-treize Makumi manomwe nematatu
74 soixante-quatorze makumi manomwe nemana
75 soixante-quinze Makumi manomwe nemashanu
76 soixante-bata Makumi manomwe nematanhatu
77 soixante-dix-sept makumi manomwe nenomwe
78 soixante-dix-huit makumi manomwe nesere
79 soixante-dix-neuf Makumi manomwe nemapfumbamwe
80 mana-vingts makumi masere
81 quatre-vingt-un makumi masere nerimwe
82 quatre-vingt-deux Makumi masere nemaviri
83 quatre-vingt-trois Makumi masere nematatu
84 quatre-vingt-quatre makumi masere nemana
85 quatre-vingt-cinq makumi masere neshanu
86 quatre-vingt-matanhatu makumi masere nevatanhatu
87 quatre-vingt-sept makumi masere nemanomwe
88 quatre-vingt-huit makumi masere ne sere
89 quatre-vingt-neuf makumi masere nemapfumbamwe
90 quatre-vingt-dix makumi mapfumbamwe
91 quatre-vingt-eleven Makumi mapfumbamwe nerimwe
92 quatre-vingt-douze Makumi mapfumbamwe nemaviri
93 quatre-vingt-treize makumi mapfumbamwe nematatu
94 quatre-vingt-quatorze Mapfumbamwe nemana
95 quatre-vingt-quinze Makumi mapfumbamwe nemashanu
96 quatre-vingt-kubata Makumi mapfumbamwe nematanhatu
97 quatre-vingt-dix-sept Makumi mapfumbamwe nemanomwe
98 quatre-vingt-dix-huit makumi mapfumbamwe nesere
99 quatre-vingt-dix-neuf makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
100 muzana cien
French manhamba kubva pa1 kusvika ku100 ane mamwe nuances anofanirwa kuyeukwa. Sezvatinogona kuona, painopera muna 1, iyo inozivikanwa and UN, nenzira iyi 21 inotaurwa vingt et a, 61 zvinonzi soixante et a, nezvimwe. Mamwe ese manhamba akaumbwa nenzira inonzwisisika, chinhu chete ndechekuti iwe unofanirwa kuzvibatanidza pamwe nekunyepedzera. Nekudaro, 68 ndeye 60 + 8, ndiko kuti, soixante-huit. Zvese izvi zvatiri kuverenga ndiwo mutemo wenguva dzose wehuwandu kubva pa20 kusvika 60. Sezvatichaona zvinotevera, manhamba 70, 80 ne90 akakosha.
Iko hakuna kududzirwa kwakananga kweiyo makumi manomwe muchiFrench. Inoumbwa nenzira yemasvomhu, sezvo 70 = 60 + 10, ipapo iyo Nhamba makumi manomwe muchiFrench ndiyo soixante-dix. Nhamba makumi masere inoteera masvomhu akafanana kubvira 80 = 80 * 4, zvadaro makumi masere zvinotaurwa quatre-vingt. Pekupedzisira, makumi mapfumbamwe anova akafanana nemakumi manomwe nekuti: 90 = 90 + 80. Zvino, makumi mapfumbamwe ndeye quatre-vingt-dix. Kune manhamba epakati senge makumi manomwe neshanu kana makumi matanhatu nemasere, mutemo wechinyorwa mundima yapfuura unoteerwa. Semuenzaniso, makumi manomwe neshanu angave ari soixante-gumi neshanu uye makumi masere nemana angave quatre-vingt-quatre.
Kana iwe uchida kuona nhamba yakakura kupfuura zana takagadzirira tafura ine manhamba anosvika 100 muchiFrench, sezvo zvaizotora nzvimbo yakawanda pachiratidziri, takagadzirira PDF netafura uye neimwe nyaya kuti uprinte.
ari manhamba, sezita rayo rairo, ratidza kurongeka. Pazasi iwe unogona kuwana tafura yeFrench ordinal manhamba kubva 1 kusvika 100:
13 gumi netatu
14 chegumi nechina
15 gumi neshanu
27 makumi maviri nemanomwe
37 makumi matatu-septième
50 makumi mashanu
54 makumi mashanu-quatrième
55 makumi mashanu-cinquième
Kune rimwe divi, isu zvakare tine iyo Makadhinari nhamba, izvo zvinoratidza hukuru. Ndokunge, huwandu hwezvinhu. Semuenzaniso, kana iwe uchida kutaura kuti unayo dos zvinyoreso, iwe unoshandisa makadhinari manhamba, kana iwe uchida kutaura kuti unogara mu pasi repiri, iwe unoshandisa zvisungo. Makadhinari manhamba akafanana nenhamba dzatinoshandisa kazhinji. Zvisinei, heano makadhinari manhamba muFrench kubva 1 kusvika 100:
11 gumi neimwe
12 gumi nembiri
14 gumi neina
18 gumi nesere
19 gumi nepfumbamwe
20 makumi maviri
25 makumi maviri neshanu
30 makumi matatu
33 makumi matatu nenhatu
34 makumi matatu nemana
35 makumi matatu neshanu
36 makumi matatu nenhanhatu
37 Makumi matatu-Sept
41 kuzvidzivirira uye un
46 kubvisa hutanhatu
51 makumi mashanu uye un
56 makumi mashanu nenhanhatu
Kududzwa kwenhamba muFrench
Kuziva kududza manhamba zvakanaka kwakakosha sekuziva zvavari. Neiyi nzira, isu takugadzirira tafura iwe yaunogona kuona iyo nhamba pachayo, kubva 1 kusvika 20 Uye ungazotaura sei navo muchiSpanish kuitira kuti vanzwike nezwi reFrance, zvinonzwisisika? Ndokunge, mune tafura inotevera, sekunge iwe uri kuzoverenga muchiSpanish, iwe unozvitaura sezvazviri uye iwe uchaona kuti zvinonzwika zvakanyanya Frenchy ????
Tinovimba unowana ichi chinyorwa chinobatsira kwazvo. Kunyange zvakadaro, sezvo makumi maviri chete makumi mairi anoonekwa, isu tinewo vhidhiyo iyo munhu wechiFrench munhu anotaura nhamba idzi zvinonzwika. Sezvauchaona mukuenzanisa, zvakanyanya kana kushoma zvakafanana, pakupedzisira zviri zvekutsungirira uye kudzidzira uye kugadzirisa. Mukati mevhidhiyo:
Tevere, isu takagadzirira mashoma ekurovedza muviri kuitira kuti iwe ugone kuyedza ruzivo rwako rwehuwandu muFrench. Unogona kuongorora zvatave kudzidza muchinyorwa zvacho pasina dambudziko, chakakosha ndechekuti iwe chengeta izvo zvekutanga uye zvakakosha 🙂 Rombo rakanaka!
Iwe unoperetera sei iyo nhamba 5 muchiFrench?
Ndinoziva sei dudzira muchiFrench mutongo unotevera: «Baba vangu Vicente vane makore makumi mana nemasere»
Izvi zvakanyorwa sei Makumi nemanomwe muchiFrench?
kudzidziswa » Mitauro » French » French manhamba kubva 1 kusvika 1000
8 makomenti pa "French manhamba kubva 1 kusvika 1000"
Kubvumbi 25, 2019 pa3: 17 am
Merci wakandibatsira kuchikoro
Chivabvu 29, 2019 pa5: 44 am
Kutenda kune ino peji ndakawana 9 pabvunzo yangu
Chikumi 18, 2019 na11: 06 pm
Ndinovimba mangwana kuzokwira kupfuura bvunzo dzapfuura uye sezvazviri zvemuromo. Zvichava zvakaoma
Chikumi 13, 2019 na7: 17 pm
Ndinokutendai nemitambo iyi, ivo vakakosha kwazvo kudzidza chiFrench.
Chikumi 17, 2019 na8: 11 pm
Merci, ndakaona mamwe mhosho dzandinadzo
Chikunguru 14, 2019 pa9: 45 pm
Inonakidza kwazvo uye inobatsira kwazvo.
Nyamavhuvhu 27, 2019 pa12: 00 am
Nyamavhuvhu 2, 2019 pa2: 23 pm
Ndatenda neyakareruka uye inofadza nzira yekutsanangura zvese zvakadzama uye makorokoto pane kufarira kwako kuita kuti mutauro uyu uzivikanwe.